We Fight We Win. -- " More than Media ": ဥရော ပရောက် အစ္စလန်ဘာသာဝင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်
ဥရော ပရောက် အစ္စလန်ဘာသာဝင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မွတ်စလင်မ်များအပေါ် အနိုင်ကျင့်နေမှု၊လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေမှု များ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချ သော ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ ဥရောပအဖွဲ့အစည်းရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊နော်ဝေးနိုင်ငံ၊ဟော်လန်နိုင်ငံ၊ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရောက် မွတ်စလင်မ်များကလက်တွဲကာ စုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ —
"လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေမှု များ "Dear Ko Moe Thee, Do you think, this words need to use it for Myanmar ?
Ko Moe Thee, you should care to use proper words in your bolg. We had proud for your past action, but sometime your blogs have alots of nonsences